NY FANAFIHAN'I ROSIA SY I SHINA ARY NY FANAFIHANA NOKLEARY AVY... - discussion24.online
fulgence6 publié ...
NY FANAFIHAN'I ROSIA SY I SHINA ARY NY FANAFIHANA NOKLEARY AVY ANY KOREA AVARATRA, ATAO AMIN’I ETAZONIA
4 Septembra 2016 – Ireo teny ara-paminaniana avy amin’i Jesosy Kristy nomeny an’i Gwendolen Rix Song (Etazonia)
Ny takarivan'ny 4 Septambra 2016, dia niresaka tato am-poko, mikasika ny fanafihana hitranga izay ataon’ireo andiana miaramila amin'ny mamatonalina i Jesosy Kristy, ary ho tanterahiny any amin’ny morontsiraka atsimo-andrefan'i Etazonia. Nilaza tamiko ny Tompo fa ity fanafihana ity dia heverin’ny maro fa fanafihana ataon’ny mpampihorohoro nefa ny marimarina kokoa dia io no dingana voalohany amin'ny fanafihana ataon'ny tafika Rosiana sy Sinoa amin'ny firenena Amerikanina. Nasehoan’ny Tompo tamiko fa efa nomanin’ ilay governemanta tokana (gouvernement mondial) ity fanafihana ity ary mety hitranga ora iray aorian’ny loza voajanahary vokarin’ny HAARP amin'ny firenena Amerikana. Ity teknôlôjia ity dia afaka mamorona rivo-doza, tafio-drivotra, ary na dia ny doro ala aza, amin’ny alàlan’ny famoronana tselatra avy eny amin'ny lanitra. Handefa balafomanga amin’i Etazonia ny Korea Avaratra, hampihena ny fotodrafitrasa any amin'ny morontsiraka hafa [Miami ao anatiny].
Ireo tranga voalaza mazava tsara ao amin'ny Deoteronomia 28 ireo, dia toy ny fampitandremana nomen’i Mosesy ihany koa ka mety hitranga raha miala amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isika. Io toko faha-28 io, izay antsoina ihany koa hoe "fitahiana sy ozona", dia tokony hampahatsiahy antsika fa raha tsy mibebaka amin'ny fo ka mitodika amin'Andriamanitra isika dia hamela ireo ozona rehetra ireo hitranga toy izany koa Izy, ao amin'ny firenena Amerikanina,
Hadinontsika ny fitiavantsika voalohany. Niala tamin'Andriamanitra isika, niala tamin’ny finoana Azy ka manompo andriamanitry ny firenen-kafa. Taty amintsika rahateo no nahitana ny sarivongan’i Baphomet voalohany, izay natao hanomezam-boninahitra an'i Satana ary natsangana ao Detroit, Michigan (Etazonia). Efa nahita io sarivongana io ve ianareo? (jereo ny sary) Mirefy 2,7 metatra eo ho eo izy ary milanja iray taonina. Misy ankizy kely iray avy eo amin'ny andaniny roa, sady mijery an'i Satana izy ireo, fijery feno fanantenana izay toa midika fa hanatanteraka ny faniriany rehetra i Satana. Tena fahavetavetana atao amin’Ilay Andriamanintsika ny toy izany!
Eto Etazonia no tena feno rà latsaka be indrindra eny na dia atambatra aza ny ady nisy hatramin’izay, noho ny fahalalahan’ny fanalan-jaza. Navela halalaka ihany koa ny fanambadian’ny samy lahy sy ny samy vavy, manerana ny firenena Amerikana. Tsy zava-baovao izany nefa tena fahavetavetana eo anatrehan’ny Tompo. Manoloana ity fanambadian'ny samy lahy na samy vavy ity, dia nanapaka ny fifanarahana voalohany izay napetraka tao amin'ny Saha Edena ny Fitsarana Tampony, dia ilay manao hoe: ny fanambadiana dia eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Tsy misy fanavahana ity famaritana nomen’ny Tompo ity fa ho an’ny olon-drehetra ka azonao alaina sary an-tsaina ve ny alahelon’ny fon'Ilay Mpamorona antsika? Fa dia nahoana loatra re no nahafahan'ny firenenantsika misaraka amin'Andriamanitra toy izao? Tena tafalatsaka ambany dia ambany loatra isika, ka tsy maintsy “hozongozonina” ara-panahy (fisedrana) sy ara-batana (loza ara-boajanahary) isika raha tsy izany ho vitsy dia vitsy ny olona tonga any am-paradisa.
Tsarovy fa izay miantso vonjy amin'ny anaran'i Jesosy no hovonjena. Ny famindram-po lehibe avy amin'ny Tompo no ahafahan'ny maro miantso ny anarany ao anatin’ny fahoriany ka hidirany any am-Paradisa amin’ny ora farany. Mpamindra fo Izy. Miasa avy eo amin'ny Seza Fiandrianany, ary faniriany tokoa ny hamindra fo amintsika nohariany, indrindra amin'izao vanim-potoana faran’izay ratsy indrindra hiainan’ny olombelona izao.
Miangavy anareo aho hisaotra ny Tompo ny amin’izany: maro ireo razantsika no niditra ao am-Paradisa. Voatahy isika ny amin’ny fananana lova miaraka amin'ny Andriamanintsika.
Alohan'ny hamakiako ny Tenin'i Jesosy Tompo, dia te hilaza amin'ireo mpaniratsira rehetra izay manaratsy sy manevateva ireo mpitondra hafatra sy mpaminany ary amin’Ilay Mpanjaka sarobidy sy Mesia aho, mivavaka ho anareo aho. Mifady hanina sy mivavaka ho an'ny tsirairay avy aminareo aho, mba hamindra fo aminareo Andriamanitra. Misaotra ny Tompo aho satria tsy mba mora tezitra fa feno fitiavana. Tsarovy fa rehefa manohitra ny irak'i Jehovah ianareo, dia miantso ny fahatezeran'Andriamanitra eo amin'ny lohanareo ihany koa. Tadiavin'ny Tompo ianareo, eny ianareo rehetra izay milaza fa tsy misy Andriamanitra, na koa tsy mila mandefa iraka na mpaminany Izy fa ny hafatra rehetra dia foronina fotsiny.
Raha mba afaka mandinika na dia minitra iray monja aza ianareo hoe marina ve izany zavatra hambara izany ka mangataka amin’ny Tompo amim-pahatsorana hoe asehoy ahy araka ny fombanao ny fahamarinan’izany, dia hanome voninahitra ny Teniny Izy, arak’izay hitantsika ao amin'ny Matio 7: 7-8 "Mangataha dia homena ianareo. " Anontanio ny Tompo raha marina ireo hafatra ireo! "Mitadiava dia hahita." Mitadiava ny Tompo amin'ny alàlan'ny Soratra Masina. "Dondomy dia hovohainy ianareo." Fa na iza na iza mangataka, dia homena. Ianareo, mpaniratsira sy mpanevateva, raha manontany amim-pahatsorana sy amim-panajana ianareo dia ho valiany tokoa.
Ireo andinin-tSoratra masina ireo dia tena fiantsoana tokoa ho anareo rehetra mpanaraby sy mpaniratsira, mba hizaha toetra ny fanahy amin’ny alàlan’ny hafatra. Ary hanontanio ny Tompo raha marina izany fa tsy mba mandainga Izy, ary raha manontany Azy ianareo dia azo antoka fa hahita fomba iray hanamafisana aminareo Izy fa avy Aminy ireo hafatra ireo. Ireo teny ireo dia sarobidy tokoa, ary tsy olombelona Izy ka handainga, na zanak’olombelona, ka hibebaka noho ny fahadisoan-teny.
Hitranga avokoa ny zava-drehetra nolazainy. Noho izany ampitomboy ny finoanao ary diniho ny zava-mitranga.
Andeha ary isika hanohy ny hafatry Jesosy Kristy, mikasika ny fanafihana ataon'ny tafika Rosiana sy Sinoa, ny firenena ao Etazonia
Ireto ny tenin'Ilay Mpanjaka sy Mpamonjy antsika dia i Jesoa Kristy.
"Ho anareo zanako Malala,
Ry zanako izay monina ao Etazonia, miantefa aminareo manokana ity hafatra ity. Amin'izao fotoana efa miha-mandroso alina izao, dia te-hizara aminareo ny teti-dratsy ataon’ny fahavalo amin’ny firenenareo Aho. Ry malala, efa miasa ilay Fanjakana tokana amin’izao fotoana izao, miaraka amin’ireo birao miafina manerana izao tontolo izao. Raha jerena dia toa tahaka ny mbola misy demokrasia eo aminareo nefa raha ny tena marina, izay zavatra rehetra hitanareo amin'ny fahitalavitra sy amin’ny vaovao rehetra dia lainga avokoa. Miainga avy any amin'ny helo [Satana] avokoa izany. Ny Papa sy i Barack Obama dia manapotika izay zavatra rehetra maneho fahalalahana ao amin'ny firenenareo.
Tsy mbola nitotongana ny banky ao Etazonia, mbola mizotra tsara ny rafim-pampianarana, ary toa tahaka ny mandeha ara-dalàna ihany koa ny tafika, Ny herin’ny Fanahy Masina eto an-tany irery ihany no antony’izany. Raha vao manaisotra ny Fanahy Masina sarobidy eto amin’izao tontolo izao ity Aho, dia hisavoritaka ary hivadika tanteraka ny zava-drehetra.
Ireo ankizy kely tsy manan-tsiny no hakarina mialoha, ary manaraka azy avy eo ny Fiangonako. Hanomboka handefa ireo olomasina [ireo 144.000 izay voafidy manokana], hitory ny Filazantsara tena marina eny an-dalambe ho an’ny olona very Aho.
Henoy tsara ry zanako, averiko indray hoe "Filazantsara tena marina", satria hatrizay ela izay dia misy ireo mpitoriteny izay mandroba ny haren’ny zanako hamenoany ny kitapom-bolany. Mampianatra ny fomba fahombiazana eto an-tany izy ireo raha tokony ny harena ao amin'ny Fanjakako any an-danitra no toriany. Mitafy akanjo lafo vidy, miaraka amin’ny karavato vita amin’ny lasoa, fitafiana vita amin’ny lamba rongony madinika... Nefa misy ankizy matory ao ambany tetezana sy anaty baoritra manerana ny tany tontolo. Misy moa fianakaviana iray manontolo mihitsy no matory anaty fiara [simba], miady amin'ny hatsiaka amin'ny alina.
Ary tsy ho ela dia tsy hahita toerana handosirana intsony izy ireny satria ho avy ny Antikristy, izay hanenjika ny olon-drehetra ka hanery azy ireo hitondra ny mariky ny anarany. Hanenjika anareo izy ka hanolotra anareo. Rehefa afaka fotoana fohy, dia hampiseho ny tena toetrany amin’izay izy, ka handefa ny maro aminareo any amin'ny toby famonjàna samihafa, ary hanery ny tsirairay hanova fomba fisainana hifanaraka amin’ilay Fanjakana tokana.
Hitanareo, namorona eritreritra ho azy manokana ilay Antikristy, ary efa masaka anatin’ny eritreriny ny ho lasa mpanjaka ka hanery ny olona rehetra hanaraka ny baikony araka izay hitiavany azy. Tsy hamela anareo hisafidy malalaka mihitsy ny Antikristy sy ilay mpaminany sandoka. Hampiteraka korontana amin’ny firenena izy aloha, dia avy eo fehezina amin’izay ny sain’ny olona. Hifehy izao tontolo izao izy ho an'ny voninahiny manokana.
Ho tia azy mandritra ny fotoana efa voafetra mialoha ny vahoaka. Vao tapitra nefa io fe-potoana efa nomaniny io, dia hanomboka hamono ireo oloko izy, satria izy ireo no Kristianina farany eto an-tany. Tiany ho foanana tanteraka izay rehetra mahakasika Ahy, Mpamorona anareo. Noho izany, dia efa nikaroka fomba maro hamonoana ny kristianina rehetra tsy tafakatra izy, amin’ny alàlan’ny fanapariahana areti-mifindra marobe, ny pesta, eny, hatramin’ny fampiharana ny fepetra amin’ny tany misy hotakotaka (loi martiale) manerana izao tontolo izao mihitsy aza. Miolomay mihitsy izy hanatanteraka ny teti-dratsiny rehetra, ka mikaroka hevitra andro aman’alina ny amin’izany. Manana ny ekipany manokana miara-miasa aminy izy hanampy azy hahatanteraka hatramin’ny farany ny asany rehetra. Mandinika lalina sy amin’ny antsimpirihany ny amin’ izay mety ho sakana rehetra izy ary efa mametraka vaha-olana hatrany ny amin’izany izy.
Rehefa matory ireo zanako, ny Antikristy kosa misahiran-kevitra mitady izay fomba rehetra hametrahana ny mariky ny anarany, dia ny mariky ny bibidia, sy ilay antokom-pivavahany maneran-tany. Ho hitanareo eo ambany masonareo ny fitrangan’ireo zava-doza ireo ka hanenina marina tokoa izay nanamaivana ny hafatra napetrako tamin’ireo irako sy ny mpaminaniko. Io no fotoana faran’izay sarotra sy mafy indrindra hiainan’ny zanak’olombelona.
Miantso anareo zanako rehetra aho, hibebaka amin'izao fotoana izao. Mialà amin'ny fahotana. Raha manompo andriamani-kafa ianareo fa tsy Izaho sy ny Raiko, dia tokony hibebaka. Na ianareo hibebaka na hiatrika sazy any amin'ny helo noho ny nandaozanareo ny anaran'Ilay Mpamorona anareo. Be fitiavana, malemy fanahy sy mpamindra fo ary marina Aho. Fotoana izao hibebahan’ny mpanota rehetra. Mibebaha fa efa tena akaiky ny Fanjakan'Andriamanitra. Efa tena akaiky ny Fanjakan'Ilay Mpanjaka.
Famindram-poko lehibe no nahatonga Ahy handefa hafatra ho anareo koa mahaiza mankasitraka. Fantatro fa marobe ianareo no mamaky ireo hafatra mahakasika ny andro farany. Nefa Maro aminareo no tsy miraharaha. Aoka ianareo tsy hanao tsinotsinona na hanamavo ny tenin'ireo irako ireo, fa raha manao izany ianareo, dia Izaho no hamavoinareo. Tsy manamaivana izany velively Aho, torak’ izany koa ny Raiko.
Mankanesa atỳ amiko anio, ry ondry very, fa te hametraka anareo amin'ny toerana azo antoka Aho, dia eto amin'ny sandriko mahery. Ataovy izay azonao atao anio, fa tsy misy mahalala izay hitranga rahampitso.
Tompo Jesosy. "